सरकारले दिएको उपहार, जनतालाई धान्न मुस्किल
scheduleशुक्रवार भाद्र १ गते, २०७५
ठूलो सपना, महत्वकांक्षा बाँडेर वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो । दुई तिहाई बहुमतबाट चुनाव जितेपछि अब त स्थायी सरकार बन्ला, देशमा सुशासन कायम होला, जनताको चाहना पूरा होला, गरीवको दिन आयो भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए यो सरकारबाट । सबैको चाहना पूरा हुने गरी सरकारले बजेटमार्फत ह्वात्तै ठूलो उपहार दियो जनतालाई । जुन पत्याउनै नसकिने ।
उसोतः हरेक वर्षको बजेटसँगै बजार भाउ महंगिनु सामान्य नै भइसकेको छ नेपालीलाई । तर यस वर्ष आशा गरेको सरकारले ल्याएको बजेटमा नेपालीलाई केही राहत मिल्थ्यो कि भन्ने आशा थियो । त्यो पनि निशारामा परिणत भएको छ ।
झण्डै १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरकाे बजेट अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेलगत्तै बजारभाउ अाकाशियाे । विलासिताका सामानहरूमा लाग्ने कर वृद्दि गरी विकास केन्द्रत बजेट ल्याएकाे भन्दै अाएका छन् उनीहरूले । तर उनीहरूले याे विर्सिए जस्ताे छ कि विहान साँझकाे छाक टार्नुलार्इ विलासिता भनिँदैन ।
अहिलेश्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक नौहजार सातसय रुपैयाँ छ । महँगीको अनुपातमाश्रमिकले थाप्ने यो मासिक तलब निकै कम हो । यति थोरै तलबमा काठमाडौंमा बसेर गुजारा गर्न श्रमिकलाई कति कठिन हाेला ? अझ उसको तलबमा आश्रित परिवार रहने हो भने राजधानी छोड्नुको विकल्प नै रहँदैन उसकाे ।
सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै पुरानै धर्राअनुसार व्यापारीहरुले भोलिपल्टदेखि नै आफूखुसी भाउ बढाउन थाले । हरेक वर्षको बजेटपछि बजार भाउ महंगिने गरेको यसअघि नै सबैलाई थाहा थियो । त्यसैले यस वर्षपनि व्यापारीले आफूखुसी भाउ बढाए ।
दाल, चामल, खानेतेल, चिनी, तरकारीलगायत सबैको दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा भाउ बढेको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार पेट्रोलको भाउ बढाउनुपरेको भन्दै सरकारले महिनामा दुई पटकका दरले भाउ बढेको बढेकै छ । रोक्ने कुनै संकेत छैन ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे यता बजार मूल्य बढेको छ । ठूला व्यापारीले नै बढेर आएको भन्दै भाउ बढाएपछि खुद्रा मूल्य पनि बढेको हो, थोकबाटै बढेर आएपछि हाम्रोमा वृद्धि हुने नै भयो । काठमाडौंमा केही हप्ता अघिसम्म प्रतिकिलो ६० देखि ६५ रुपैयाँ होलसेल मूल्यमा पाइने चिनी अहिले ७० रुपैयाँ नाघेको छ । उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा झण्डै ९० रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ ।
खानेतेलको भाउ पनि बढेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । खाने तेल पहिलेको तुलनामा प्रतिप्याकेट १५ रुपैयाँ बढेको छ । पहिले १ लिटरको प्याक तोरीको तेल १३० रुपैयाँ पथ्र्यो । तर अहिले मूल्य बढेर १४५ पुगेको छ । यसैगरी मुसुरो दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको छ । ८५ रुपैयाँ प्रति किलो रहेको मसुरोको दाल अहिले ९५ पुगेको छ ।
त्यस्तै तरकारीको मूल्यले पनि स्थिरता कायम राख्न सकेन । बजेट भाषणको भोलिपल्टदेखि नै तरकारीको खुद्रा भाउ १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमनमा चासो नदिएपछि उद्योगी तथा ब्यापारीलाई पनि कालोबजारी गर्न सहज भएको छ ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने मानिसहरुका लागि यस वर्षको बजेटले निकै कष्टकर जीवन यापन गर्नुपर्ने बाध्याता आइलागेको छ । सरकारले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको न्यूनतम तलब मासिक १२ हजार तोकेको छ । तर, यो कमाई डेरा भाडा र सामान्य खानाका लागि मात्रै गर्ने हो भने पनि एक जनाका लागि समेत पर्याप्त हुँदैन ।
सरकारले बजेट ल्याउँदाक हाम्रो मुलुक विकाशोन्मुख राष्ट्र हो, यहाँका अधिकांश मानिसहरु गरिवीका रेखामुनि छन, त्यसैले उनीहरुको जीवनयापनलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने सोच्न विर्सियो सरकारले । खोलो तरेपछि लठ्ठी विर्सियो सरकारले’ आक्रोशिक मानिसहरु भन्छन् ।
‘गरिवी के हो क्वाटरमा बसेर, सिंह दरवारमा दिन विताएर, संसदभवनमा गएर सुत्नेलाई होइन, घाम पानी नभनी ग्राहकको पर्खाइमा बसेका भरियालाई थाहा हुन्छ । विदेशी डलर पचाउने चलखेल गर्नेलाई होइन, विहान वेलुकीको छाक कसरी छार्ने बालबच्चाको पेट कसरी भर्ने संकटमा रहेकालाई थाहा हुन्छ । त्यसैले कि त महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्छ सरकारले कि त महंगीअनुसार आयस्रोत पनि बढाइदिनुपर्छ जनताको । बाँकी चेतना भया
विमान अपहरणः ४५ मिनेटको त्यो दुस्साहस
प्रसाईं मानसिकरुपमा स्वस्थ छन् ?
‘डा. केसी अमर भइसक्नुभयो, ओलीले जीवनरक्षा गर्नुपर्दैन’
डा. केसीको सत्याग्रह, जुम्लाको गोली र चरित्र फेरेका चिकित्सक
आर्थिक समृद्धिमा सहकारी
भक्तपुर डुबानः गोहीको आँसु झारेर हुँदैन सरकार
‘अयोग्य’ मीराले जितिन् प्रचण्डले हारेको युद्ध
बर्षे विकास बजेट सिध्याउने खेलमात्रै
अर्थ / व्यापार, ब्लग
टिम्सको कारण पर्यटन व्यवसायी गैरजिम्मेवार बन्दै, विदेशीलाई ठग्ने काममात्र
सगरमाथा सपनाः बाटोमा आफ्नै मृत्यूको खबर पढेँ
मैले चिनेको डा. उपेन्द्र देवकोटा
सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र बाँस्कोटाका समर्थकलाई खुल्ला पत्र
म के-के भएँ : मुकुन्द न्यौपाने
यसकारण गर्नुहुँदैन प्रदेश नामाकरणमा विवाद
बिहे नगरी ‘बा’ बन्न चाहिँ पाउने कि नपाउने ?
३८ वर्षको अन्तरालः म बुहारी हुँदा, मेरी छोरी बुहारी हुँदा
परदेशी छोरालाई आमाको पत्र
जेलमा ७१५ दिन
भर्जिन खप्तडको मनोरम दृष्य, सुदूरपश्चिमको भविष्य : यात्रा संस्मरण
जीवन इन्द्रधनुषी हुन्छ, स‌ंसदलाई पनि जीवन्त बनाइयोस्
चर्चमा पादरीले गरे एक हजार बालबालिकालाई बलात्कार
अमेरिका, ३१ साउन । इसाइ धर्मगुरु पादरीले एक सय बालबालिकालाई बलात्कार गरेका छन् । उनीहरुले सात वर्षीया नाबालिकालाई समेत छोडेका...
एक सय ६५ वर्षपछि नयाँ मुलुकी ऐन लागू, पुरानो मुलुकी ऐन आजैदेखि खारेज
काठमाडौँ, १ भदौ । आज भदौ एकदेखि देशले नयाँ कानुन पाउँदैछ । जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला १९१० सालमा बनाइएको मुलुकी...
भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री वाजपेयीको निधन
काठमाडौं, ३१ साउन । भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको निधन भएको छ । भारतीय जनता पार्टी (विजेपी)का ९३ बर्षीय नेता...
आजदेखि १९१० सालको ‘मुलुकी ऐन’ विस्थापित, नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा
काठमाडाैं, १ भदाै । आजबाट नेपालमा नयाँ कानुन लागु भएको छ । मुलुकी देवानी र फौजदारी कार्यविधि अपराध संहिता ऐन, २०७४ भदौ १ गते ...
नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा सिंहदरबार अगाडि नग्न प्रदर्शन गर्नै लिम्बु पक्राउ
काठमाडौं, १ भदाै । नयाँ मुलुकी ऐनको विरोधमा सिंहदरवार अगाडि प्रदर्शन गर्नै जितिन लिम्बुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लिम्बुले ...
चिकित्सकहरूको आन्दोलन १५ दिन पछि धकेलियाे
काठमाडौं, ३१ साउन । नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नो आन्दोलनलाई १५ दिन ढिला सारेको छ । भोलि भदौ १ गतेदेखि नै विरामी नजाँच्ने आन्दोलन...
‘रोनाल्डोले छोडेपनि रियलको मनोबल उच्च’
काठमाडौँ, १ भदौ । स्टार खेलाडी सर्जियो रामोसले रियल मड्रिडले सानदार बाउन्स ब्याक गर्ने बताएका छन् । क्रिस्टियानो रोनाल्डोले...